Semalt Shares 7 Zvimwe Zvakanakisisa Zvokugadzira Zvombo
Maminitsi mashanu. Hapana mubvunzo kuti iyi ndeimwe yepamusoro uye inonyanya kukosha web scraping zvishandiso paInternet. Data Scraping Studio ine simba uye inoshandiswa-inoshandiswa neyakashandurwa uye inotsvaga data kubva paAjax sites, password-protected sites, mashomanana uye masimba masayithi, XML, JSON nemamwe mabhuku akafanana. Zvimwe zvezvishamiso zvayo zvinotaurwa pasi apa.
Sezvimwe zvese zvinonzi scrapers, Data Scraping Studio inopa nzira iri nani yokutsvaga mazwi - how to setup a wired home network and wireless network. Iwe unotofanira kutora uye kushandura iyi shandiso uye uishandise kuronga data yako zvichienderana nemashoko ako ezvinyorwa. Inounza zvakawanda zvemashoko nemashoko ekufemera kubva. Nokudaro, haisi kungotsvaga data yako chete asiwo inoronga iyo zvichienderana necheki-muswe wako uye kwenguva refu-misi mikuru.
2. Kuongorora Kwemisika:
Data Scraping Studio ndiyo chete inokonzera misika yakanaka kutsvaga vashandisi vayo. Kusiyana nedzimwewo dzakawanda data scrapers , iyi sarudzo inopa zvibereko zvakanaka zvichienderana nekutsvaga kwako. Saka, yakakwana kune vatengesi, vatsvakurudzi veIndaneti, vadzidzi, vatapi venhau, uye nyanzvi.
3. Dhiyabhorosi yekubatanidza data:
Chikonzero chakanakisisa chekushandisa Data Scraping Studio ndechokuti inopa mazano anobatsira ekubatanidzwa kwewebhu yewebhu. Iyo inowirirana neyese web browser uye maitiro ekushandura, zvichiita kuti zvive nyore kwauri kuti unyatsotora data yako uye uzvibatanidze iyo maererano nezvido zvako.
4. Kuenzanisa data
Kunyange iyo-top notch data scrapers haikwanise kuenzanisa data yemaziti maviri kana kupfuura. Ndinofara, Data Scraping Studio ine sarudzo iyi uye inokuita kuti uongorore dheji yemapeji akasiyana ewebhu kuitira kuti uve nechokwadi chekuwana mhinduro uye yakavimbika. Zvakare, iyi shanduro inochinja data zvishoma, ichibvisa mapepa ose epelenzi nemagiramu kubva pane zvawakabuda.
5. Kuongorora kwehutano:
Iyi purogiramu inotarisa hutano hwe data yako apo iri kutorwa kubva. Zvinoreva kuti haufaniri kuramba uine ziso pamusoro pekubviswa sezvo chigadziri ichi chichangoita kuti iwe uoneke uye data inogona kuoneka mumutauro wako waunofarira.
6. Nhoroondo / Zvichemo zvakapiwa:
Vashandisi vepurogiramu iyi vanowana nyore kuwana maitiro uye zvigadzirwa zvemiti. Zvinoreva kana iwe uri kushandisa Data Scraping Studio yako ye-e-commerce website, unogona kuwana ruzivo kubva kuma giants akaita seAmazon ne eBay usingatengesi pahutano. Iwe unogona kuedza chigadzirwa ichi kuti uwane zvinyorwa zvemiti, urongwa hwemazita avo, tsanangudzo dzavo uye kunyange mifananidzo. Nokudaro, tinogona kutaura kuti Data Scraping Studio inonyanya kushandiswa kune Amazon Scraper uye Facebook Data Extractor.
Vashandi vakasiyana-siyana vanogunun'una pamusoro pekushaiwa kwemashoko ekutsvaga basa. Kusiyana nemashandisi akawandisa, Data Scraping Studio ichakuchenjerera kana data yakabatwa. Iwe unongoda kuchinja zvirongwa zvayo uye kutanga kutambira zvizivo zviri mubhokisi rako rekuda. Iwe unogonawo kunzwisiswa kune mobile yako uchishandisa nzira dzayo dzinokosha. Nokudaro, Data Scraping Studio ndiyo software yakakwana iyo inova nehanya nekutora deta yako yekubudisa nzira yakanyatsonaka uye yakakodzera. Chinhu chakanaka ndechekuti inouya pasina mari.